Tilder Moyo Archives - Hatirare 263
Home Tilder Moyo
Mwana akabuda mukanwa negarwe 13..
Mrs Tilda Moyo Fan - March 4, 2021 0
Danisa Masuku MWANA mukomana ane makore 13 okuberekwa anogara mubhuku raDick, kuHwange, anonzi kasvipwa negarwe rainge ramuruma gumbo mushure mekunge arwisana naro apo rakamubata achiraura...
N’anga nemaporofita vochemerera kujungwa jekiseni redzihwa mupengo rinonzi Kovhidhi
Mrs Tilda Moyo Fan - March 1, 2021 0
Kingstone Mapupu N’ANGA nemaporofita vanoti havasi kuzosaririra kumashure muchirongwa chekubaiwa majekiseni ekudzvirira kuti vasabatwe nechirwere cheCovid-19 icho chakaparurwa neHurumende svondo rapera. VaGeorge Kandiyero, avo vanova mukuru...
Vasikana vanotengesa muriwo wepakati voti vanodawo kupihwa Vaccine pekutanga sezvo vari maEssential workers
Mrs Tilda Moyo Fan - February 27, 2021 0
Muchaneta Chimuka VANHU vanoita mabasa ekutengesa miviri yavo vanonzi vari panjodzi huru yekutapurirwa kana kutapurira vamwe – kusanganisira vavanodanana navo – chirwere cheCovid-19. Nokudaro kune mapoka...
Otsvaga rubatsiro rwekuvhiiwa rakakwara munjodzi
Kingstone Mapupu MURUME wekwaMashayamombe, kuMhondoro, ari kutsvaga rubatsiro kubva kune veruzhinji rwekuti akwanise kuvhiiwa ruoko rwake urwo akakuvara paakadhirikirwa ari pasi pemugodhi achiita zvechikorokoza. VaJohannes Choga...
Vanhu vanosvika 465000 vosungwa nemhosva yekutyora mitemo yekunzi garamumba iwee
Kingstone Mapupu VANHU vanodarika 465 000 vanonzi vasungwa nemapurisa nekuda kwemhosva dzekutyora mitemo ine chekuita nekudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19 kubvira pakatanga denda iri munyika muno...
Akabata mwana ane 15 years chibharo
Mrs Tilda Moyo Fan - February 26, 2021 0
Simbarashe Hwata anobvuma kuti akapara mhosva yekubata mwanasikana ane makore 15 chibharo. Achitaura anoti paakange arikunze asati avekuChikurubi prison aizviti anonamata asi mukati make...
Vaifunga kuti achamuka……..
Madzima Jennifer Dheka nemurume wavo KWAYEDZA payakashanyira nzvimbo iyi nemusi weChitatu svondo rino yakawana Madzimai Jeniffer Dheka (38) vanogara panhamba 8906 apo vanoroja nemhuri yavo...
6 DAYS’ ARERE NECHITUNHA
Kingstone Mapupu MUDZIMAI anoroja mumusha weKuwadzana Phase 3, muHarare, anonzi akagara nechitunha chemurume wake kwemazuva matanhatu apo airara nacho kusvikira chawora achiti ainge audzwa nemweya...
Mbuya Merita Chingwaru (kurudyi) nenyoka yavakaiswa muhuro naTsikamutanda ‘Sekuru Gondo’. Muchaneta Chimuka VAGARI vekuSanyati nekuGokwe — kunyanya chembere neharahwa — vanonzi vaoneswa nhamo nekushungurudzwa nen’anga dzemanyepo...
Madzimai Dziva vobatsira vanhu pamusha weChitungwiza
Mrs Tilda Moyo Fan - February 25, 2021 0
Zita rokuberekwa vanonzi Sarah. Madzimai Dziva vanouchika vanogashira vana, vanocheka masari, vanokwesha nhova, vanokwesha nyora, kugeza mamhepo. Zvirwere zvakasiyana siyana zvakaita semisana, mudumbu, chipfuva...
Sekuru vane 93 years vakabata mwana ane 13 years chibharo
Mrs Tilda Moyo Fan - February 24, 2021 0
Sekuru Lazarus Nyamusimba vanobva kuMt darwin varikutongerwa mhosva yekubata mwana chibharo. Mwana ane makore 13 uye mwana wavasahwira wavo. Vachibvunzwa sekuru vanoti ndakangoona mapurisa ouya...
Zvikwambo pamba pehomwe yamufemberi
Sekuru Dziva vekuDzivarasekwa vanoti ndakaona homwe yamufemberi nemhuri dzavo vachiuya mudare mangu, ndokupinda navo mumatare ndokusangana nenhoroondo yehushereketwa nezvikwambo izvi zvanga zvichinetsa mukati memusha...
Kingstone Mapupu SADUNHU Murape vekuDomboshava, VaTendai Gilbert Mungate, vanoti vari kushushikana nekuda kwevanamuzvinhabhizimisi vane mabhawa avo vari kuvhura kusvika pakati pehusiku uyewo nevamwe vanhu vari...
Husiku hwose arere nechitunha
Mrs Tilda Moyo Fan - February 19, 2021 0
Tendai Gukutikwa naLiberty Dube MURUME wekwaZimunya, kwaMutare anonzi akaponda mudzimai wake, ndokumanikidza mwanasikana wake ane makore 14 okuberekwa kuti atakure mutumbi wacho nebhara uyo akazopedza...
Vakasiirwa bhegi rine ‘coffin’ Bhokisi
Kingstone Mapupu VAGARI vekwaMurape, kwaChinhamora, kudunhu reDomboshava vakaitirwa mashura apo vakamuka vachiona pamakuva ari pedyo nechikoro cheko pakakandwa zibhegi iro vakavhura ndokuwana muine bhokisi rinovigirwa...
Kingstone Mapupu MURUME wekuCentenary, kudunhu reMashonaland Central, ari kunzi akabatikidzwa achishinha nembudzi yevaridzi muchirugu pakati pehusiku. Mutauriri wemapurisa kudunhu reMashonaland Central, Inspector Milton Mundembe, vanotsinhira nyaya...
Mwana akafira ‘musink’
Kingstone Mapupu MWANA wemakore mashanu ekuberekwa anonzi akatsitsirirwa ndokufa nemudhuri wesink waive wadhirika papurazi reRedan apo panonyanya kuzivikanwa nekunzi Kefalos mumugwagwa weHarare-Marirangwe-Mhondoro, kuBeatrice. Mutauriri wemapurisa kudunhu...
Mwana ane makore 16 arikupika 9years kuChikurubi prison nekuda kwemombe dzakabiwa nababa
Mrs Tilda Moyo Fan - February 18, 2021 0
Claude April mukomana ane 16 years arimujeri nekuda kwe theft. Claude aisagara pamba aigara kwaaishanda achifudza mombe. Claude akazoshanyira baba vake ndokusvika pamba paine...
Akabata chibharo aine 15 years, ndokutongerwa kugara mujeri 12 years.
Mrs Tilda Moyo Fan - February 16, 2021 0
Hardlove aidanana nemudzimai wemunhu. Murume wacho akazomubvunza iye ndokuramba kwakubva amuti dakukuendesa kumapurisa kuti ukudanana nemukadzi wemunhu. Sezvineiwo murume uye akanomhan'ara kumapurisa achiti Hardlove aida...
Gadhi akaba tambo dzemagetsi
Mrs Tilda Moyo Fan - February 15, 2021 0
Muchaneta Chimuka MURUME anoshanda semurindi pane rimwe purazi riri kuBeatrice akabatwa uye ndokufumurwa nemumwe waanosevenza naye mushure mekunge aba tambo dzemagetsi dzinokosha $4 920. Mutongi wedare...